Iindaba - Ngaba kulungile ukusebenzisa iziphelo zebarb kwipayipi yentsimbi ephothiweyo yePTFE
Ngaba kulungile ukusebenzisa iziphelo zebarb kumbhobho we-PTFE ophothiweyo
Abantu banokubuza ukuba ngaba kulungile ukuqhoboshela i-PTFE yentsimbi ephothiweyo ye-fuel hose kwi-barb fitting end kunye ne-standard hose clamp kwi-low pressure carb fuel system.
Abantu banokufuna ukutshintsha yonke imibhobho yentsimbi ephothiweyo kunye ne-PTFE, kwaye babe ne-barb fitting ekupheleni kweendawo ezimbalwa, kwaye babhadule ukuba kuya kusebenza?
I-PTFE lukhetho olukhulu kwiisistim zamafutha kodwa kufuneka usebenzise nokuba unokuphinda usetyenziswe okanye ucukucezwe ufakelo lwe-AN. Ungajonga la mazwana angezantsi kwezi ntlobo zimbini zokufakelwa kweziphelo:
1, I-PTFE iphinda isebenziseke isiphelo se-hose ejikelezayo kulula ukuyifaka kwaye isebenziseka lula, esebenzisa inkqubo enamacandelo amabini ukugcina umbhobho kwindawo. Ngoyilo olukhethekileyo lokunyanzeliswa, lunokusetyenziswa kwakhona ngaphandle kokulimaza umdibaniso, kunye nesikhokelo esidibeneyo esidibeneyo sinokuthintela umonakalo kwi-tube yangaphakathi. I Isidibanisi sethumbu le-PTFEibotshelelwe ngoomatshini kwi-PTFE hose core ukubonelela ngetywina elikhulu elinokwenzeka, kwaye ipleyiti yentsimbi engatyiwayo yangaphandle ibotshelelwe ngokwahlukileyo ukufikelela olona gunya lunokubamba lombhobho. Zinobunzima obuncinci, kodwa zibanga ukuba zinendlela yokuqinisa ithumbu ekhuselekileyo kunezitshixo zokutyhala.
I-2, Ukufakwa kombhobho onqabileyo ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kwiindawo. Bakha i-hoses ezininzi kuba ifuna umshicileli we-hydraulic kunye nesikhunta esithile sokukrazula ngokufanelekileyo ikhola ukuya ekupheleni kombhobho. Aba matshini kunye nomngundo bahlala bebiza kakhulu, ngoko awuyi kubona abantu okanye iinqwelo ezincinci ezizisebenzisayo. I-hose ekhutshiweyo ifuna i-crimp collar entsha ukuba iphinde isetyenziswe, kodwa ithathwa njengeyona nto inamandla kunye neyona nto inokwethenjelwa xa ikhutshiwe ngokuchanekileyo.
Besteflon izixhobointsimbi engatyiwayo ephothiweyo ye-PTFE imibhobho yamafutha eneziphelo zokufakwa ngokutsha kwe-AN, okanye izifakelo ezikrunekileyo ziphela ngokobukhulu obuqhelekileyo be-AN6, AN8, AN10. Nayiphi na imibuzo okanye imibuzo malunga noku, qhagamshelana ngokukhululekileyo neqela lethu lokuthengisa ku-sales02@zx-ptfe.com
ithumbu elimnyama le-ptfe kushishino lweemoto
Ixesha lokuposa: Nov-06-2021
Iziqhoboshi: Imibhobho yeCunifer okanye imibhobho ye-SS PTFE? |...
Ufakelo lwe-AN/imigca: Ingxelo efunekayo kwi...
ithumbu eqatywe i-ptfe, umbhobho weptfe, Indawo yokunyibilikisa ye-Ptfe Tube, Convoluted Ptfe Hose - 939/939b, ithumbu elilukiweyo le-ptfe, 6an Ptfe Hose iNdibano,